Tarsan | News From Somalia
Category Archives: Tarsan
Wadooyinka Muhiimka ah ee magaalada Muqdisho ayaa haawanaya iyadoo ay adag tahay inay isticmaalaan gaadiidka iyo dadweynaha,waxaana ka jira cabsi iyo amaan xumo aan caadi ahayn.
Amisom ayaa bixisay amarka lagu xiray wadooyinka halbowlaha u ah magaalada Muqdisho, iyadoo sheegtay inay ka hortagayso weeraro kayimaada Shabaabka Somalia oo ay aad ugu sahlantahay inay ka adeegtaan saacad walba.kuwaas oo muuq ahaan ka maqan Moqdisho sanooyin laakin sirdoon qarsoon uga howlgala meel walba oo ay rabaan!.
Wadooyinka xiran waxaa kamid ah Maka Al-Mukarama oo ah halkii ugu mashquulka badnaa wadooyinka caasimada Muqdisho, waana wadada kaliya oo si buuxdaay uga taliso dowlada Federaalka oo fadhigeedo yahay Villa Somalia,waxayna qeb ka tahay Lixda xaafadood oo bada xiga oo lagu joogo xooga Amisom iyo isbaarada maleeshiyo beeleedka |Gurguurte.
Xasan Gurguurte iyo maamulkiisa tabarta yarayaa ku mashquulsan Mooshino, safiiro socoto aah ooo dalakaba degaan ku lahayn, wafdi dano qarsoon ka leh dalka Somaliyeed iyo arimaha Kismaayo oo mar hore loo gacan galshay gumaysiga Igad.
Maleeshiyo Beleedka Dowlada oo isku haysta Xawaalada Dahabshiil ee Suuqa bakaaraha!!
Waxaa Suuqa bakaaraha isku haysta Maleeshiyo Beeledka dowlada kuwaas oo ka kala mar qaata ninka gudoomiyaha ka ah Degmada Hodan Jacfar “Ex Mooryaantii Qanyare” iyo maleeshiyo beeleed kale oo ka amar qaata nin kale oo Kaabo Mooryaan ah,waxaana la isku haysta gacan ku haynta Xawaalada Dahabshiil ee Suuqa Bakaaraha oo laga qaato dhaqaalo wanaagsan.
Ma ahan wax cusub in arinakan oo kale oo ka dhaco meelaha ay joogaan Maleeshiyo Beeleedka loogu yeero ciidanka Dowlada,kuwaas oo hada meel walba soo dhigtay jidgooyo”ISBAARO” lala yaabay!!.
MOQDISHO:-Amisom oo dumar guryaha kala baxday kadibna kufsada Deg Heliwaa ee gobolka Banaadir!
Shacabka ku dhaqan Deegaanka Suuqa Xoolaha Degmada Heli waa ee Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ay isi soo tarayaan dhibaatooyinka ay kala kulmaan askarta Dowladda Federaalka ah ee halkaas jooga.
dil, dhac, kufsi, handadaad iyo ganacsigoo cariiri la gelshay ayaa ka jira Suuqa Xoolaha.
sidaas oo ay tahay Ciidamadu waxa ay la kulmaan dilal kaga imaanaya rag ka tirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin oo Muqdisho howlgalo ka fuliya.
Markasta oo iyaga dhibaato soo gaarto Cidda ay ka aarsanayaan waa shacabka sida dadka Deegaanku u sheegeen Idaacadda Islaamiga ah ee Alfurqaan.
geesta kale askarta Uganda ee jooga Xerada Maslax ee Suuqa xoolaha ayaa kufsi baahsan kula kacaya Dumarka xaafadaha u dhaw degan.
haweeney ka mid ah dadka ku ganacsada Deegaanka Suuqa Xoolaha oo Xalay u warantay Idaacadda Islaamiga ah ee Alfurqaan ayaa sheegtay in ka sokow kufsiga ay gabdhaha xafadahaasi degan kula kacaan askarta Dowladda Federaalka ah ugandheysku xoojiyeen Dumarka ay Kufsanayaan kadibna jidadka la soo dhigayo iyagoo Miir daboolmay.
DHAGEYSO HAWEENAY JOOGTA SUUQA XOOLAHA